News 18 Nepal || परिणीति चोपडाले नग्न फोटोसुट गरेपछि..
परिणीति चोपडाले नग्न फोटोसुट गरेपछि..
एजेन्सी । परिणीति चोपडा आजकाल आफ्नो फिल्म साइनाका लागि चर्चामा छिन् । यसवर्ष उनी एकपछि अर्को गर्र्द विभिन्न प्रोजेक्टमा देखिने भएकी छिन् । यी खबरका बीच परिणीतिको एउटा फोटोसुट चर्चामा छ । यो फोटोसुटमा परिणीति चोपडा नग्न अवतारमा देखिएकी छिन् ।
परिणीति चोपडाको यस्तो रुप देखेपछि कतिले उनको यो बोल्डनेसको तारिफ गरेका छन् भने कतिले मज्जाले ट्रोल गरिरहेका छन् । डब्बू रत्नानीको क्यालेन्डरमा सनी लियोनी, कृति सेननदेखि कियारा आडवाणीसम्मका थुप्रै नायिकाले बोल्ड फोटोसुट गराएका छन् ।
अब यो सूचीमा परिणीति चोपडाको नाम आएको छ । डब्बू रत्नानीले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा परिणीति चोपडा फोटो सेयर गरेका छन् । यो फोटोमा परिणीति नग्न देखिएकी छिन् । यो फोटोमा धेरैले कमेन्ट पनि गरेका छन् ।
एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘गाडी आएको छ, घरबाट फोहोर निकाल ।’ अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘यो त फोहोर हो, यसलाई चाँडै नै फ्याँक । ’ यस्तै अर्काले लेखेका छन्, ‘ओएमजी कपडा बिना नै ।’
स्मरण रहोस्, परिणीति चोपडाले बडी सेमिङ बारे आफ्नो कुरा राख्दै करियरको सुरुवातमा आफ्नो बढेको तौलका कारण उनले निकै आलोचना झेल्नुपरेको बताएकी थिइन् । उनले बडी सेमिङलाई धर्तीको सबैभन्दा हास्यास्पद चिज भएको बताएकी छिन् ।
सलमान खानले फिल्म ‘राधे’को रिलिज विषयमा गरे नयाँ खुलासा
बलिउडमा कोरोना संकट, क-कसलाई देखियो पोजेटिभ ?
विवाहको डेढ महिनामै दीयाको सरप्राइज, अभिनेत्री बन्दैछिन् आमा
किरण खेरलाई ब्लड क्यान्सर, अनुपमको भावुक पोस्ट
दिल्लीमा अजय देवगनलाई मानिसहरुले कुटेकै हुन् त ?
बोल्ड तस्वीरसँगै मलाइकाले दिइन् होलीको शुभकामना
आमिर खानलाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ अवस्था ?